လက်ရှိအချိန်မှာ ကင်မရာအကောင်းဆုံးဖုန်း ၃ လုံးက ဘာတွေလဲ? – MyTech Myanmar
လက်ရှိအချိန်မှာ ကင်မရာအကောင်းဆုံးဖုန်း ၃ လုံးက ဘာတွေလဲ?
လက်ရှိစမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံး နောက်ကျောဘက်မှာ ကင်မရာ ၃ လုံးတပ်ဆင်ထားတဲ့ Huawei P20 Pro စမတ်ဖုန်းကတော့ အကောင်းဆုံးစမတ်ဖုန်းကင်မရာနေရာကို ရရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Huawei ဟာ 40MP Camera အပြင် 20MP Telephoto Camera ကိုပါထည့်သွင်းထားပြီး Zoom ကို Hybrid Zoom အနေနဲ့ 5X အထိ ရိုက်ကူးနိုင်ဦးမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် AIS လို့ခေါ်တဲ့ AI Stabilization လည်းပါဝင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။ 960fps Super Slow Motion Video လည်း ရိုက်ကူးနိုင်ဦးမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်ရဲ့ Samsung Galaxy S Series စမတ်ဖုန်းတွေဖြစ်တဲ့ Samsung Galaxy S9 နဲ့ S9 Plus စမတ်ဖုန်းတွေက အခုအချိန်မှာ ဒုတိယမြောက်ကင်မရာအကောင်းဆုံးဖုန်းတွေလို့ ပြောရမှာပါ။ လက်ရှိစမတ်ဖုန်းတွေထဲမှာ ပထမဆုံး Dual Aperture f1.5 နဲ့ f2.4 ကို ကူးပြောင်းနိုင်တဲ့ 12MP Camera တပ်ဆင်ထားတာက လက်ရှိ Low Light အကောင်းဆုံးသော ကင်မရာဖုန်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ 960fps Super Slowmotion Video တွေအပြင် AR Emoji တွေလည်း ပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
Google Pixel2နဲ့ Pixel2XL ဖုန်းတွေက 12.2 Megapixels Single Camera ပဲပါဝင်တာဖြစ်ပြီးတော့ အခြားဖုန်းတွေမှာ ပါဝင်သလိုမျိုး Dual Camera စနစ်ပါဝင်ခြင်းမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်လည်း Google ရဲ့ HDR+ စနစ်နဲ့ Artificial Intelligence နည်းပညာကို အသုံးပြုထားတဲ့အတွက် လက်ရှိအချိန်မှာ အကောင်းဆုံးသော ဓါတ်ပုံတွေကို ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်သလို Portrait ပုံတွေကိုပါ Single Camera နဲ့ ရိုက်ကူးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
MyTech Myanmar2018-05-14T16:15:13+06:30May 14th, 2018|Mobile Phones|